LOZAM-PIARAKODIA TANY FRANTSA :: Lehilahy sy vehivavy bevohoka malagasy nipitika tao anaty fiara • AoRaha
LOZAM-PIARAKODIA TANY FRANTSA Lehilahy sy vehivavy bevohoka malagasy nipitika tao anaty fiara
Samy namoy ny ainy avokoa ireo lehilahy iray, 36 taona, sy vehivavy iray, 21 taona, mitondra vohoka tany Charnay-les-Mâcon, any Frantsa, afak’omaly vao maraina, tokony ho tamin’ny 7 ora. Tra-doza ny fiara marika «Renault Megane» nentin’izy ireo.
Nipitika tany amin’ny zato metatra tany ho any ilay vehivavy mavesatra. Misy vehivavy iray hafa sy ankizy iray nipetraka taorian’ny fiara mbola miady amin’ny fahafatesana, hatramin’ny omaly.
Avy any Paris nikasa hihazo an’i Lyon izy mianakavy saika hanao fialan-tsasatra ireto, araka ny fitantaran’ireo zandarimaria nijery ifotony ny zava-niseho. Tsy fantatra ny antony nahatonga ny loza fa ireo mpitandro filaminana no manahy ho mety vokatry ny torimaso fotsy na fahasarotan’ny fahitana.
“Ny zava-misy mahatonga ny loza amin’ity toerana ity matetika dia miala vao maraina be any Paris ny mpitondra fiara ka efa reraka izy ireo no mandalo eto. Tamin’ity loza ity anefa, tsy mbola fantatra izay antony fa ny vokatry ny famotorana no hahalalana an’izay. Ny mampalahelo dia ilay mpamily namoy ny ainy”, hoy ny lehiben’ireo zandary tonga teny an-toerana araka ny hita tao amin’ny pejy www.macon-infos.com, omaly.
Araka ny loharanom-baovao teto an-toerana dia samy avy any Nosy Be ireto niharam-boina ireto. Misy ny fiantsoana fifanampiana eo amin’ireo Zanak’Avaratra, fa indrindra ireo avy any Nosy Be monina any Frantsa manoloana izao loza mihatra izao. Nitohana naharitra ela ny fifamoivoizana tany an-toerana vokatr’io loza io, araka ny voalaza ao anatin’ ny vaovao tamin’ny tranonkalam-pifandraisana hatrany.
ONIVERSITEN’ANTANANARIVO :: Voarara ny fandravana mpianatra rehefa misy fitokonana